Nin Naagtiisa u furay Casiirka sacuudiga laga cabo | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
June 7, 2015 · by biyacade	· in aan feejignaano, Baarka Village, biyacade, by shaacir shidane, ciidamadana hala shaqeeyaan"ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu baaqay shacabka inay sameeyaan isku duubni. Madaxweynaha oo ka hadlayay weerarkii todobaadkii hore ka dhacay Nairobi ee lagu qaaday, dadka haka digtoonaado, entertainment, hala iska dhaafo xanta iyo far isku fiiqa iyo siyaasad xumada"ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweynaha oo ka hadlayay wixii uga soo qabsoomay shirarkii uu uga soo qeyb galay Belgium iyo Mareyka, HOME, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.107070795978681.13297.100000272829256&type=1&l=5fc504c79e, Ila qosol, ILA QOSOL, isagoo is bar bar dhig ku sameeyay weeraradii Muqdisho iyo kii todobaadkii hore ka dhacay Nairobi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la sameeyo feejignaan, isagoo ka jeediyay khudbad taariikhi ah oo uu uga hadlay xaalada dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay. Dib ugu soo laabashada Madaxweyne Xasan Sheekh ee Caasimada Soomaaliya ayaa ku soo beegantay, isagoo ku baaqay in laga shaqeeyo horumarka iyo dib u dhiska dalka, isla markaana shacabka ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago weeraro ku soo wajahan. "Cadawga wali waa nagu soo maqan yahay, isla markaana Soomaaliya uu la jecel yahay inuu wax la qabto. "Hadii la dhihi jiray caalamka waa kala qeybsan yahay caalamka uma soo jeedo Soomaaliya Caalamka wuxuu noo muujiyay inuu Soomaaliya jecel , iyadoo si aad ah loo adkeeyay ammaanka, kadib labo todobaad oo safar dibada ugu maqnaa ayaa ka digay weeraro Al-Shabaab ka yimaada, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, video.	·
Haweeneey soomaali ah baa xilli hore u tahriibtay dalka sacuudi carabiya waxeeyna halkaasi u aaday shaqo iyo lacag ay dooneeysay in ay guri ka dhisato, haweeneeyda waxeey aheeyd xaas leh laba caruur ah, waxeeyna ku dhaaftay ninkeedii.Muddo dhowr sano ah kadib ayeey ku soo laabatay soomaaliya waxaana garoonka diyaaraha ee xamar ku soo dhaweeyay ninkeeda oo muddo sugayay.
Maalintaasi waxeey aheeyd jimco, sida laga wada war qabo maalinta jimcaha waa maalin dadku aysan shaqeeyn oo guryaha la wada joogo.
Islaantii waa la soo dhaweeyay waxaa loo sameeyay qado wanaagsan markii la gaaray waqtiga qadada oo laga soo baxay khudbada jimcaha ayaa la qadadii lawada cunay oo meesha kaftan ka dhacay.
Gabadhani xaaska ah oo dhalin yarana ah ayaa raashiinka ka dharagtay oo dareentay in ay caloosha buuxdo, markaas beey inta jimicsatay Tiri SACUUDI waxaan ugu xiisay FASHninkeedii oo maqli jiray haweenka sacuudi jooga in ay ku dhiban yihiin dhimanka oo ay yihiin kuwa dareenkooda jooga ayaa shaki galay baa u qaatay in ereyga FASHa yahay galmo ay u xiistay halkii ayuuna ku furay.
Asagoo sii raacay waa ogaa awalba in sacuudi lagu fasahaado.
Islaantii oo yaaban baa tiri’ oo maxaad igu furtay ? Maxaan se ku fasahaaday?!!
Ninkii ayaa yiri orod doono Fashta aad u xiistay.
Tala faraha waa ka baxday waxeeyna u sheegtay in ay ka waday cabitaanka casiirka ee marka la dabool qaadaya dhahaya FASH.
Casiir daraadii baa loo furay” FASH”
Boob lagu hayo kheeraadka soomaaliya →